४ पटक बिहे गर्न– कि छवि हुनुपर्दो रहेछ कि रवि ? - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
४ पटक बिहे गर्न– कि छवि हुनुपर्दो रहेछ कि रवि ?
फिल्म निर्माता छवि ओझा र सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने यतिबेला समाजिक सञ्जालमा मजाकका सिकार बनिरहेका छन । पछिल्लो पटक रवि ओझाले कानको जाली फुट्ने गरि चौथौ श्रीमती शिल्पा पोखरेल कुटपछि, यो बिषयले चर्चा पाएको हो । छवि र रवि दुबैले बहुबिबाह गरेका हुन् ।
छविका चार श्रीमती हुन् । अहिले उनीसंग शिल्पा पोखरेल श्रीमतीको रुपमा छन् । उता छवि जस्तै नाम भएका रविको पनि चौथौ बिबाह भएको बेला–बेला हल्ला हुने गरेको छ । उनीसंग अहिले निकिता पौडेल छिन् । रविको बिबाह चौथौ भने आधिकारीका होइन । दोस्रोभने पक्का नै हो ?
यसरी छवि र रविको नामपनि मिल्न गएकाले फुसबुकमा ४ पटक बिहे गर्न– कि छवि हुनुपर्दो रहेछ कि रवि लेखेर ट्रोल बनिरहेका छन् । छविपनि चर्चित, रविपनि चर्चित । यस्तो देख्दा कस्तो लाग्दो हो, यी मजाकका २ पात्रलाई ?